Yintoni eluncedo kwisitya esahlukileyo
Ngexesha lethu kunzima ukufumana abantu abasempilweni. Wonke umntu amaphupha avuke kwindawo ephilileyo, enomoya oqaqambileyo, kodwa, ngelanga, bambalwa kuphela abanokuziqhayisa ngelo lizwe. Bambalwa abantu bazama ngandlela-thile ukutshintsha indlela yabo yobomi: ukuba bacetyiswe, badle ngokufanelekileyo. Namhlanje kukho indlela enzima kakhulu yokuqina, efumaneka kuwo wonke umntu. Lona isitya esahlukileyo, esiluncedo kakhulu kumntu. Indlu nganye inebhati yokuhlambela nokuhlamba. Kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi oko kuncedo kwisitya esiluhlukileyo. Kuvela kuye okuhle kakhulu. Le nkqubo ingasetyenziswa ngokukhawuleza, ngoko ke abantu abathatha isilwanyana ezahlukeneyo emva kweenyanga ezimbalwa baqala ukuziva bebhetele ngakumbi.
Ngaba luncedo kangakanani isitya?
Akunabo bonke abantu abanokugqiba isigqibo kwi-shower ehlukile. Ngeentsuku zokuqala zokusebenzisa isitya, akukho zivakalelo ezingathandekiyo, kodwa kuphela ukuphazamiseka okuthile kunye nokuxhatshazwa. Le nkqubo inceda ngokuqinisekileyo ukuvuselela umzimba wethu, iqinisa isimiso somzimba, iphucule kakhulu isikhumba kunye nokunikezelwa kwegazi, kwaye inceda ukunciphisa umzimba kunye nokulahla i-cellulite. Abaninzi bethu banamavila ukuthatha isilwanyana esahlukileyo kwaye ngoko ke fumana izizathu ezininzi zokungayithathi. Ukuze uqale ukuthatha isilwanyana sokuhlukana, kufuneka ukwazi ngokubhekiselele kuyo yonke into eyenziwa ngayo.
Ukwahlula okungafaniyo kunako ukunika umzimba womntu amandla, amandla kunye nokukhuselwa kwiindawo ezibandayo. Okokuqala, kukuqeqesha umzimba wethu. Xa sisisebenzisa, iimisipha zethu, iinqanawa, iiseli, i-capillaries, kunye nayo yonke into esemzimbeni wethu nasemzimbeni wethu, uqeqesha ngokugqibeleleyo. Kukhawuleza ngokukhawuleza ukuba kwenzeke kunye nemetabolism, kwaye oku kuthetha ukuba ubunzima obunzima bulibaziseka kakhulu. Ngokumkela rhoqo isilwanyana esichaseneyo, umzimba unako ukutshisa zonke iikhalori ezingena emzimbeni, kwaye ulusu lukhuni, luya kuba lukhulu. Kodwa oku kufuneka wenze umgudu. Ukuhlambalaza ngeentlobo eziphambili zamanzi, unokwenza uhlobo lweesetyhula ezintsheni kunye nesisu.
Isitya sokunqanda singafani nokuba singathathi bonke abantu, kodwa yonke into ngenxa yokuba ishahla inika ukuva. Abasetyhini banquma ukuthatha umphefumlo onzima kunzima, kuba isikhumba sabo sincinci kwaye sininzi. Nangona kunjalo, kufuneka kuphawulwe ukuba iimvakalelo ezingathandekiyo zivakalelwa kuphela ekuqaleni kwesitya, ngoko umzimba uyazisebenzisa, kwaye awuziveleli. Emva kweendlela ezininzi zokufumana isitya esichaseneyo, uba ngumkhwa aze abe ngumzimba wokuzivocavoca. Kungcono ukuba ufunde umphefumlo ehlobo, ukuze ubusika uzive ungcono kwaye unamandla.
Ungathatha njani isilwanyana esahlukileyo ngokuchanekileyo?
Ukuze ukwazi ukuba ungayifumana njani isilwanyana esahlukileyo ngokufanelekileyo, kufuneka ukwazi kakuhle ukuba isitya esahlukileyo sisebenzise kangakanani kwaye sisetyenziswe ngayo. Okokuqala, cwaka kwaye uhlabe. Emva koko kufuneka ufumane italiti eninzi, zama ukuyenza kungekhona ithenda, kodwa ngokulandelana. Thatha iswahlulo esahlukileyo, kwaye emva koko kufuneka utyumle ngokunyakaza okunyusa ukunyuka kwegazi emzimbeni. Enye yeemeko ezimiselweyo kule nkqubo kubanda kakhulu. Gcina ukhumbule ukuba ekuqaleni amanzi kufuneka afudumele, kwaye emva koko ushushu.
Umzimba wakho awufanele ube nexesha, kodwa ukhululekile. Yima phantsi kwamanzi ashisayo malunga nomzuzu, uze uvula amanzi abanda kakhulu. Ngaphantsi kwayo kufuneka umele ixesha elide. Nciphisa izinga lokushisa ngokuthe ngcembe, ngokukhawuleza. Tshintsha ukushisa kwamanzi kwinyanga. Kwesinye ishawa, tshintsha ubushushu bamanzi ama-4 ukuya kuma-5 amaxesha, gqiba isitya ngamanzi abandayo, uze ulungise ityhuthi ebomvu ukuze ubomvu.
Musa ukubeka intloko yakho phantsi kwesitya esahlukileyo, nokuba ngumntu ophilileyo. Ngaphandle koko, ukuxinwa okuxinyiweyo kunokuqala, okanye kubanda kakhulu okanye enye indlela yokuvuvukala. Ngexesha lokuhlamba, kufuneka uhambe ukusuka kwelinye ilanga ukuya kwelinye ukwenzela ukuba iinyawo zakho zifumane isabelo sawo samandla. Isitya sokutshatyalaliswa kufuneka sithathwe imihla ngemihla, nanini na kunokwenzeka 2 amaxesha ngosuku. Ukuba uziva ubuthathaka emzimbeni wakho, kufuneka uqhubeke nokuqhuba inkqubo. Okubaluleke kakhulu, oku kulandelwa kwenkqubo enjalo.
Kwiiveki ezimbalwa umzimba wakho kunye nokuzivikela kuya kuba namandla ngakumbi, umsebenzi we-endocrine nkqubo uya kuphucula ngokuphawulekayo, kwaye imeko yemisipha kunye nemithambo yegazi iya kuphucula. Uza kubona ukuba ulusu emzimbeni luya kuba selula, lutsha, luya kuphinda lube lu-elastic and smooth. Ngethuba lokuthobela le nkqubo, isikhumba sakho senza ezinye i-gymnastics. Amanzi atshisayo asebenza kakuhle kwii-pores-zivula, kwaye amanzi atshisayo azivale. Ngesilwanyana esichaphazelekayo, zonke iibhox kunye neetekisi zipheliswa emzimbeni, yingakho isikhumba sibe sempilweni. Izifo aziyi kukukhathaza ixesha elide.
Ziyingozi kumphefumlo we-contrarian.
Ingozi yomphefumlo ochaseneyo kukuba abanye bayithatha kakubi. Kuba umzimba wabantu abaninzi, amanzi abandayo kukuxinzelelo. Ngenxa yoko, imiphefumlo enjalo iphikisana ngokungqinelanayo. Isidalo ngasinye sihamba ngendlela yaso. Ngaphambi kokuba uthathe isilwanyana esahlukileyo, bhetele uqhagamshelane nodokotela wakho ukuze kungabi nemiphumo emibi.
Ukhathala okungapheliyo izilwanyana zabantu
Konke malunga ne-angina
I-anyanisi ngumthombo wamavithamini
Indlela yokwenza iinwele zikhudlwana kwaye zinyame?
I-cocktail ye-chocolate kunye ne-mint rim kunye ne-yogurt
I-Potato casserole ngegalikhi
I-Nicotine kunye nomphumo wayo kwimpilo
Inkomo kunye neembotyi
Ziziphi iindumiso abantu abazenzayo?
I-coat ye-Oatmeal kunye nama-nati nama-cherries
Inendima yokuncedisa ekuphuculweni kwengqondo yobuntu
UAlyona Shishkova ubonise oko akwenza ezintandathu ezintandathu ekuseni
I-Pakora ene-anyanisi eluhlaza
Ngendlela efanelekileyo ukuhlamba iimpahla?